Zoma 16 Oktobra 2020 – FJKM
Zoma 16 Oktobra 2020
Ny teny namalian’i Davida an’i Goliata eo amin’ny and 45 no nampianatra antsika ho sahy sy hijoro hiatrika ny ady eo anoloantsika fa tsy hanao tari-dositra . Ampianarina àry isika hoe :
Atreho amin’ny finoana ny adinao
1- Fa aza mihemotra
« Fa izaho kosa manoloana anao… » hoy i Davida eo anatrehan’i Goliata izay mihaika azy . Aseho antsika eto ny fahasahiana sy ny hafanampo ananan’i Davida , tsy nihemotra izy na dia hita aza fa manam-pitaovam-piadiana àry fomba tamin’izany sady manana toe-batana matanjaka ny fahavalo eo anoloany fa niroso izy . Tsy vahaolana ny fandosirana ny fahavalo na ny olana eo anoloana fa ny miatrika kosa satria izay sahy miatrika no afaka hanantena fa handresy .
2-Aza miantehitra amin’ny herinao
« Manatona anao amin’ny Anaran’i Jehovah Tompon’ny maro… », hoy i Davida . Ambarany eto fa tsy izy amin’ny maha-Davida kely azy eto no manatona hiady , tsy fitaovam-piadiana ihany koa no arangarangany fa Andriamanitra mihitsy no soloiny tena . Ianao koa , miantehera amin’ Andriamanitra fa aza mihevi-tena ho mahavita tahaka an’i Goliata . Resy ianao raha miantehatra amin’ny fitaovana . Tsy mahay na inona na inona ianao raha misaraka Amiko , hoy i Jesoa, ka miraisa Aminy hatrany .
3-Fa manana Andriamanitra mahery ianao
Ny dikan’ny hoe : « Jehovah Tompon’ny maro… » dia he : Jehovah Andriamanitry ny tafika , izany hoe : tena Andriamanitra Tompon’ny hery mihitsy . Koa tsy mampanahy ny miankina Aminy amin’ny ady tsy maintsy atrehana , ary fantantsika ny tohin’ny tantaran’i Davida fa nampandresen’Andriamanitra izy . Koa aza kanosa fa matokia Azy (Isa 9.5) , hampandresy anao Izy . Ny fahafatesana aza noreseny .
Inona no mampatahotra anao tsy hiatrika amim-pahasahiana ny adinao amin’ny fotoana sasany ?